China Multi-function Brushing machine BD1A ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Jinqiu
Ọ nwere ike na-eji maka ihicha kapeeti, ihicha ala, wax wepụ na obere-ọsọ polishing.
Nkebi Nke BD1A BD2A BD3A
Voltaji 220 / 50Hz 220 / 50Hz 220 / 50Hz
Ike 1100W 1100W 1100W
Ugbu a 6.92A 6.92A 6.92A
Gbanyụọ ọsọ ntụgharị 154rpm 154rpm 154rpm
Zụ 54dB 54dB 54dB
Ahịhịa ahịhịa 17 ” 17 ” 17 ”
Ibu ibu 49.66kg 48.36kg 49.66kg
Ogologo eriri 12m 12m 12m
Mbukota 4CTN / Nkebi 4CTN / Nkebi 4CTN / Nkebi
Agba Blue, ọbara ọbara, odo Blue, ọbara ọbara, odo Blue, ọbara ọbara, odo
Nke a bụ ntakịrị aghụghọ iji burnisher iji chekwaa mbọ. Dị ka ọ na-adị, anyị na-eji aka abụọ ejide aka ahụ ala. Savingzọ nzọpụta kachasị dị mma ma nwekwaa nchekwa kwesịrị ịbụ ijide aka na aka aka ekpe n'akụkụ ala, yana aka nri iji jide aka na ntụgharị ihu site na ala ruo n'elu, wee mezie aka ahụ n'úkwù. Mgbe ị na-agbasi mbọ ike, jiri ụkwụ na-enyere aka, iji aka ekpe na-aga n'ihu, na aka nri na-adọta oji, nke nwere ike ịchekwa mbọ ọzọ.
Anyị nwere igwe eji arụ ụlọ iji kwado mkpa gị. Dị ka nha 13 ”, 17” na 18 ”, ọsọ nwere 154rpm 175rpm, ụdị dị iche iche maka ịhọrọ gị.
Nke gara aga: Multi-ọtọ n'ala igwe-SC002
Osote: Multi-ọrụ Brushing igwe BD2A
15L / 30L / 60L / 80L Wet na kpọrọ nkụ agụụ Cleaner LC1 ...